Fanaovana politika maloto : Tratra ny nafenin’i Dadafara -
AccueilSongandinaFanaovana politika maloto : Tratra ny nafenin’i Dadafara
Izay manome betsaka sy manome tambiny ihany no tohanan’i dadafara , na Joseph Martin Andriamampionona, izay izy vao manohana kandidà amin’ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa. Mazava tsara mantsy ny nambarany tamin’i Marc Ravalomanana nandritra ny fotoana vitsy nifampiresahan’ny roa tonta, “Ahoana ny fiaraha-miasantsika mianaka rehefa avy eo”. Raha adika tsotsotra ny tiany lazaina dia hoe, inona no toerana omenao ahy sy ny tambiny rehefa lany ianao. Saim-bola tsy mijery ny ho avin’i Madagasikara fa ny tenany ihany, izay no azo hamaritana ny politika manokan’i dadafara. Tsy vitan’ ny manontany fotsiny i Dadafara fa manery tsotr’izao, satria nambarany fa “maika hivory ny birao politikany ka hanapa-kevitra”. Tsy tahotra tsy henatra fa dia zatra ny fiainany eny Mandilaza feno loto sy fisainana hafahafa ary adivarotra, Hany ka na dia raharaham-pirenena aza, mbola entina anaty adivarotra ihany. Soa fa tsy nanaiky lembenan’ny mpanao politika tahaka an-dry Dadafara i Marc Ravalomanana, ka tsy maika ho lany amin’ny fanohanan’ny olona mpivarotra tanindrazana.
Fantatr’i Marc Ravalomanana mantsy fa vina ara-tseza ity tadiavin’ i Joseph Martin ity, izay tsy anatin’ny fomba fanehoan’ny kandidà laharana faha-25 velively. Matoa kosa nilaza i Dadafara fa mifanaraka tsara amin’ny vinan’i Andry Rajoelina ny tetikasany, dia efa vita ny adivarotra, ary ho minisitra izany i Dadafara raha sanatria lany eo ilay tohanany. Noho izany dia tokony hanampo ny rehetra, fa hameno paosy ingahy Joseph Martin Andriamampionona, ary tsy hijery ny fahantran’ny Malagasy velively. Iza koa moa izany no mahalala fa tsy niray tsikombakomba tamin’ny dahalo i Dadafara, fony izy minisitry ny fiompiana. Manoloana ity fihetsika tia mivarobarotra ity, dia tokony hisokatra ny fanadihadiana tamin’ny raharaha halatr’omby, fony Dadafara minisitry ny Fiompiana sy ny fambolena.